I-China Handwashing Fluid fektri nabaphakeli | I-Sinnovation
Ama-1.7% we-alcohol hand sanitizer sanitiser gel abulala ngempumelelo ama-99.99%, angalimazi isandla sakho
2. Can ngempumelelo futhi ngokushesha
3. Imnene futhi ayicasuli, ayilimazi isikhumba
Ungagezi ngamanzi, kulula ukonga amanzi
4.Gel ukuthungwa, ungakwazi ukulawula kalula inani. Usayizi omncane, kulula ukuthwala
Thatha inani elifanele (2-3ml) lomkhiqizo ukuze uthoba izandla zakho
bese usikha imizuzwana eyi-15 kuze kube yilapho uketshezi lusimboza izandla zakho, linda ukoma, futhi ungagezi ngamanzi.
Thayipha I-sanitizer yesandla
Iqembu Leminyaka Abadala
Ingqobelo Amakhemikhali, U-75% Utshwala
Isithako esiyinhloko Glycerine
Okwenziwe ngesandla Cha
Geza isitayela Amanzi
Isici Ukuhlanza Okuyisisekelo, i-99.9% Antisepsis
Indawo Yemvelaphi China
I gama le-brand Cha
Igama lomkhiqizo Isifutho Sotshwala
Ukusetshenziswa Isifo Sokuhlanzeka Kwezandla
Igama lomkhiqizo I-sanitizer yesandla
Ingqobelo U-75% Utshwala
Isici 99.9% i-Antisepsis Iyaphatheka
Ukusetshenziswa I-sanitizer yesandla
Isitifiketi I-CE / FDA
Izindlela Zokukhokha I-Alibaba Trade Assruance / Paypal / Bank ukudlulisa, njll
Ukuhambisa I-DHL / FEDEX / UPS
1. Iziqukathi zokuthola, ukugcinwa kwesikhashana nokusetshenziswa kufanele kufakwe uphawu oluthembekile, futhi iziqukathi ezingenasembozo zivinjelwe ngokuphelele.
2. Naka umoya omncane ongaphakathi ngaphambi kokuwusebenzisa. Lapho kusetshenziswa utshwala ngaphakathi endlini, umoya omncane kufanele uqinisekiswe.
3. Musa ukusebenzisa utshwala eduze komlilo noma umthombo wokushisa. Ngaphambi kokuwusebenzisa, izinto ezingamamitha namalahle ngaphakathi kwamamitha ayi-20 ezizungeze indawo esetshenziswayo (ukubuyisa utshwala) zizosuswa ngokuphelele. Utshwala bunendawo yokulahla ephansi futhi buthambekele ekuqubekeni komlilo uma umlilo noma ukushisa; ukukhubaza i-disse ongaphezulu kwemishini kagesi, cisha ugesi kuqala bese ulindela ukuthi izinto zikagesi zipholile ngaphambi kokuqhubeka; uma kusetshenziselwa utshwala ukusula isitofu ekhishini, cisha umthombo womlilo kuqala ukugwema ukuqhuma okubangelwa ukuqothuka kotshwala.
4. Ngesikhathi nangesikhathi sehora elilodwa emva kokufafaza, ukubhema nomlilo kuvinjelwe ngokuphelele endaweni yokufafaza.
5. Isembozo esingesiphezulu sesitsha kufanele sivalwe ngokushesha ngemuva kokusetshenziswa ngakunye, futhi kwenqatshelwe ngokuphelele ukusivula.
6. Ithawula elisetshenzisiwe namanye amathuluzi okuhlanza izindwangu ayohlanzwa ngenani elikhulu lamanzi ahlanzekile bese elondolozwa endaweni evaliwe noma afakwe endaweni engene umoya eyomile.
7. Ukulahlwa kotshwala okucisha ugesi: I-ABC, i-CO2 kanye nezinto zokucima umlilo owomile zingasetshenziswa ukucisha umlilo, amathawula amanzi nezingubo zingasetshenziselwa ukucisha umlilo, nesihlabathi singasetshenziselwa ukumbozwa kwangaphandle. Kuvinjelwe ngokuqinile ukusebenzisa ukusatshalaliswa kwamanzi noma amathawula owomile nezingubo zokushaya, uma kungenjalo, uma kunakwa utshwala, umlilo uzosabalala futhi usakaze, bese kuba mkhulu umlilo.
8. Akukalulekanga ukugcina utshwala ngenani elikhulu ekhaya. I-Alcohol iwuketshezi olunokuvutha futhi oluguquguqukayo. Lapho abahlali behlanza amakhaya abo ngotshwala, kufanelekile ukusebenzisa utshwala obanele. Musa ukugcina inani elikhulu lotshwala ukugwema ukushiya izingozi zokuphepha emlilweni.
9. Gcina kude nezingane. Emindenini enezingane ezincane, utshwala kufanele bungagcinwa lapho izingane zingafinyeleli. Ezinganeni esezikhulile, abazali bangachazela izingane zabo ngezimpawu zotshwala, bazifundise ukungadlali ngotshwala, ingasaphathwa ngomlilo.
Esedlule: Ama-gloves alahlekile angenamandla angenasici we-Powder